LAYAAB:- Dowladda Federaalka Soomaaliya, ma idihii la gawracay ayay eersatay? – Madal Furan
Hoy > Warka > LAYAAB:- Dowladda Federaalka Soomaaliya, ma idihii la gawracay ayay eersatay?
LAYAAB:- Dowladda Federaalka Soomaaliya, ma idihii la gawracay ayay eersatay?
Editor March 24, 2018 March 24, 2018 Warka 0
Muqdisho (Madal Furan) – 15kii Jan. 2018 ayay aheyd markii xaafado ka mid ah magaaladda Muqdisho lagu daadiyey neefaf Ido ah oo inta la gawracay cusbo lagu dul daadiyey.
Dhacdaan ayaa waxaa ay cabsi gelisay dadweynahii ku noolaa xaafadahii lagu daadiyey xoolahaas gawracan, waxaana ka dhashay hadal hayn badan oo ku wajahan danta laga leeyahay iyo cidda ka danbeysay.
Ilaa iminka lama ogaan cidda sida rasmiga ah uga danbeysay falkaas, waxaase si weyn ay bulshadu u hadal haysay inuu ahaa nooc sixir ah oo lala beegsaday qaar ka tirsan Masuuliyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Haddaba, waxaa iminka soo baxaya hadal hayn ay bulshadda qaarkeed ku cabirayaan in hawlgalkii Idahaas la gawracay looga dan lahaa uu bilowday kadib markii Golayaasha Dowladda Federaalka Soomaaliya ay luqunta isla galeen.
Guddoomiyaha Baarlamaanka FS Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa iminka miiska u saaran sidii loo bireyn lahaa, iyadoo la saadaalinayo inuusan Raysal Wasaare Xasan Cali Kheyre uusan wax badan ka danbeyn doonin.
Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo oo ah Hogaamiyaha DFS ayaa u muuqda nin aamusnaan kaga jawaaba dhacdooyinka kulul ee ka dhasha dowladda uu hogaamiyo, balse qudhiisu uusan ka badbaadi doonin mooshin ugu-danbeyntana xilka looga qaadi doono.
Jaahwareerka ka jira golayaasha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dad badani ka muujiyeen niyadjab ay ka qabaan inaysan muuqan isu tanaasul iyo kala roonaasho ay ku badbaadinayaan dowladda curdinka ah.
Xildhibaanadda Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Sooomaaliya oo wajahay saldhiga khilaafka siyaasadeed ayaa u kala xusul duubaya Laba siyaasadood oo si weyn isaga soo horjeeda, kuwaasoo sharciga u adeegsanaya qoloba sida ay danteeda u aragto.
Isku soo wada duuboo, Mooshinka xilka looga qaadayo Mudane Jawaari ayaa ah mid si kedis ah golaha ugu soo dhex dhacay iyadoo Kulanka Baarlamaaku socday Saddex maalmood oo keliya, balse u muuqda mid xiisadiisu gaartay meel ay adag tahay in wax laga soo celiyo.
Dowladda Itoobiya oo dedejineysa dacwada loo haysto Cabdi Maxamuud Cumar oo maxkamad la soo taagay
Hoobiyeyaal lagu weeraray agagaarka Madaxtooyada Villa Somaliya.
Akhriso:- Guddi ka shaqeyn doono Saddex arrimood oo ku taxaluqa doorashooyinka Jubbaland oo la magacaabay